नेपाल टेलीकम द्वारा निःशुल्क सिमकार्ड बितरण • Kalanga News
गृह/प्रदेश समाचार/प्रदेश नं. ७/नेपाल टेलीकम द्वारा निःशुल्क सिमकार्ड बितरण
सत्यराज सिहँ बझाङ,बझाङको बुङगल नगरपालीकामा नेपाल टेलीकम दुरसञ्चार कार्यालय बझाङले निःशुल्क सिम काड बितरण गरेको छ । देशैभरी दुई वर्ष भन्दा बढी टावर राखीएको ठाँउमा निःशुल्क सिम बितरण गर्ने योजना अनुरुप बझाङका अधिकाङस स्थानीय तहमा उक्त आयोजना रहेकाले बुङगल नगरपालिकामा पनि वितरण गरिएको छ ।
बुङगल नगरपालीकाको साविक देउलीकोट गा.बि.स. र दहबगर क्षेत्रमा पुगी नेपाल टेलीकमले निःशुल्क सिमकार्ड बितरण गरेको सहायक अधिकृत बम बहादुर सिंह ले बताउनु भएको छ । सिंहका अनुसार उक्त सिमकार्डमा रु पचासको रिचार्ज समेत यथावत रहने बताईएको छ ग्राहाकलाई बढि भन्दा बडि सञ्चार सुबीधा दिनका लागि उक्त सिमकार्ड बितरण गरीएको सिंहले बताउनु भएको छ । नेपाल अधीराज्य भरीनै अहिले यो योजना लागु रहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।